လူငယ်များအကြားတွင် Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုအတွက်အချက်များ - တကယ့်ဘဝကဏ္Crossစုံလေ့လာမှုမှတွေ့ရှိချက်များ (၂၀၁၈) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်ရှိ Porn တွင်
Volume ကို 199, Issue 4, ဖြည့်စွက်, ဧပြီ 2018, စာမျက်နှာ e1004
Pozzi, Edoardo, Paolo Capogrosso, အေသြကန်ယို Ventimiglia, သော Filippo Pederzoli, Lucas Boeri, ဝေါလ်တာ Cazzaniga, Francesco Chierigo et alUrology ၏ဂျာနယ် 199 မရှိ။4(2018): e1004 ။
Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (ED) လျော့နည်း 40 နှစ်ပေါင်းထက်အသက်ငယ်ရွယ်လူတို့တွင်တစ်ခု ပို. ပို. အဖြစ်များတိုင်ကြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းပညာသင်နှစ်စင်တာမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုများအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရှာကြံလုလင်တစ်ဦးဆောင်များတွင်တစ်ခုချို့ယွင်း erectile function ကို (EF) နဲ့ဆက်စပ်အချက်များအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ်။
ပြည့်စုံသောလက်တွေ့နှင့်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလူနာ ၃၀၇ ဆက်တိုက် <ရည်ညွှန်း။ အသက် ၄၀ ကျော်လူနာများအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည် andrology လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှုတစ်ခုတည်းပညာရေးစင်တာ၏ဆေးခန်း။ ကျန်းမာရေးနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ရောဂါများကို Charlson Comorbidity Index (CCI) ဖြင့်အမှတ်ပေးခဲ့သည်။ လူနာအားလုံးသည် International Erectile Function (IIEF) ရည်ညွှန်းချက်၊ Beck ၏စိတ်ကျရောဂါဆိုင်ရာ Inventory (BDI) နှင့် International Prostatic Symptom Score မေးခွန်းလွှာ (IPSS) ကိုပြီးစီးခဲ့သည်။ ED ပြင်းထန်မှုကို Cappelleri ၏သတ်မှတ်ချက်အရခွဲခြားထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် (IIEF-EF ဒိုမိန်း <၂၆ အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်) EF နှင့်အတူလူနာများကိုပုံမှန် IIEF-EF ရမှတ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခဲ့သည်။ Mann-Whitney နှင့် Fisher တို့၏အတိအကျစမ်းသပ်မှုများကိုအုပ်စုနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်များကိုစမ်းသပ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် 229 (75%) နှင့် 78 (25%) လူနာ EF ပုံမှန်နှင့်ချို့ယွင်း EF; ED နှင့်အတူလူနာအကြား, 90 (29%) ပြင်းထန် ED (IIEF-EF <11) အတွက်အကြံပြုချက်တစ်ခု IIEF-EF ရမှတ်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ED နှင့်မပါသောလူနာများသည်ပျမ်းမျှ [IQR] အသက် (၃၂.၀ [၂၇.၀၃၃.၀] နှင့် ၃၁.၀ [၂၄.၀-၃၆.၀၁])၊ BMI (၂၃.၇ [၂၁.၉-၂၀၁၁]) နှင့် ၂၃.၄ [၂၂.၂-၂၄.၆] ၏သိသိသာသာကွဲပြားမှုမရှိပါ။ ) ၏ပျံ့နှံ့မှု သွေးတိုးရောဂါ (၇.၅% vs. ၂.၆%)၊ အထွေထွေကျန်းမာရေးအခြေအနေ (CCI≥7.5: ၄.၈ နှင့် ၂.၆%)၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသမိုင်း (၂၉% နှင့် ၃၁%)၊ အရက်သုံးစွဲမှု (၈၈% နှင့် ၈၈%) နှင့်ပျမ်းမျှ IPSS ရမှတ် 2.6 [1-4.8] vs. 2.6 [29-31]) (အားလုံး p> 88) ။ အလားတူစွာသွေးရည်ကြည်၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဘယ်သူမျှမကွဲပြားခြားနားမှုအစီရင်ခံခဲ့သည် လိင်ဟော်မုန်း နှင့်အုပ်စုများ (အားလုံး p> 0.05) အကြား lipid ပရိုဖိုင်းကို။ ED နှင့်အတူလူနာများသည်ပျမ်းမျှ IIEF-Sexual Desire ဒိုမိန်းရမှတ်များ (၇ [7-6] vs.9[9-8], p <9] နှင့်ပိုမိုမြင့်မားသော BDI ရမှတ်များ (0.01 vs. 7.0, p = 5.0) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ ပုံမှန် EF နှင့်အတူသူတို့နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် ED နှင့်အတူလုလင်တို့သည်ပုံမှန် EF နဲ့နှိုင်းယှဉ်-အသက်အရွယ်အုပ်စုတစ်စုကနေအခြေခံလက်တွေ့သွင်ပြင်လက္ခဏာများ၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကွာခြားမပြပေမယ့်အနိမ့်သရုပ်ဖော် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒ ဆေးခန်း ED ၏တစ်ဦးထက်ပိုဖြစ်နိုင်ခြေ psychogenic အကြောင်းမရှိအကြံပြုခြင်းရမှတ်များ။ ပညာရေး၏စောဒကလူပျိုတို့အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာဆေးသမားအကောင့်သို့ဤယူသင့်ပါတယ်။